အများစုသော လူပျိုကြီး/အပျိုကြီး များ၏ စိတ်ကူး
၁။ ဘာသာရေး ကိုင်းရှိုင်းတတ်သည်။
၃။ တိရိစ္ဆာန်ကလေးများကို ချစ်တတ်သည်။
၄။ တူ၊တူမကလေးများကို အချစ်ကြီးတတ်ကြသည်။
၅။ တူ၊တူမကလေးများကို သူတို့လိုနေရန် တိုက်တွန်းတတ်ကြသည်။
၆။ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခုကျဘို့ အကြာကြီးစောင့်ရတတ်သည်။
ရ။ အမြဲလိုလို ဟိုဟာကောင်းနိုး၊ဒီဟာကောင်းနိုးရွေးရခက်နေတတ်သည်။
ဂ။ အဖေ၊အမေ ကို သူများထက် ပိုချစ်တတ်သည်။
၉။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် လည်း သူများထက်ပိုချစ်တတ်သည်။
၁၀။ အချစ်၊အိမ်ထောင်ရေးအကြောင်း သူများထက် ပိုသိဟန် ပြတတ်သည်။
၁၁။ အချစ်၊အိမ်ထောင်ရေးအကြောင်း သူများထက် ပိုမိုစိတ်ဝင်စားတတ်သည်။
၁၂။ မိုးလေ၀သလို ခန့်မှန်းရခက်တတ်သည်။
၁၃။ လိုရင်းမရောက်ဘဲ ဝေ့လည်ကြောင်ပတ် ပြောတတ်သည်။
၁၄။ အတိတ်၊နမိတ် ၊တဘောင် တို့ကို ယုံကြည်တတ်သူများဖြစ်သည်။
၁၅။ မရွာသောမိုးကို မျှော်ကိုးတတ်သည်။
၁၆။ နှမြောတွန့်တိုသော်လည်း အလှူဒါန အပေးအကမ်း ရက်ရောတတ်သည်။
၁၇။ စိတ်ထားကောင်းသော်လည်း တဗျစ်တောက်တောက် ပြောတတ်သည်။
၁၈။ လူစိမ်းများကိုအားမကိုးဟန်ပြသော်လည်း ရင်းနှီးသူများကိုအားကိုးလွန်တတ်ကြသည်။
၁၉။ သီချင်း၊၀တ္တု၊ရုပ်ရှင် (အနုပညာ)များကို နင့်နင့်နဲနဲ ခံစားတတ်ကြသည်။
၂၀။ တစ်ခုခုကိုကြိုက်မိလျှင်ဖြစ်စေ၊မကြိုက်လျှင်ဖြစ်စေ ပြောမပြီးတတ်ကြချေ။
၂၁။ အရှက်၊အကြောက် သာမန်ထက်ပိုကြီးတတ်သည်။
၂၂။ ဒိုင်ယာရီလိုစာအုပ်မျိုးကို ရေးဖို့ထက်သိမ်းထားဖို့ စိတ်ဝင်စားသူများဖြစ်တတ်ကြသည်။
၂၃။ အသက် မေးလျှင် (စိတ်တွင်းက) စိတ်ဆိုးနေတတ်ကြသည်။
၂၅။ ဗေဒင်၊လက္ခဏာ၊နတ် တို့ကို သူများထက် စိတ်ဝင်စားတတ်ကြသည်။
၂၆။ အတိတ်အကြောင်းကို လွမ်းမောနေလေ့ရှိသော်လည်း ထုတ်ဖော်ပြလေ့မရှိကြ။
၂ဂ။ အပျိုကြီး၊လူပျိုကြီး ဟုအပြောခံရမှာကြောက်တတ်ကြသည်။
၂၉။ သို့ရာတွင် အိမ်ထောင်ရှင်ဟုအထင်ခံရမည်ကို ပိုပြီးကြောက်တတ်ကြသည်။
၃၀။ အိမ်ထောင်ပြုချင်နေသောသူ ဟု အထင်ခံရမည်ကိုကား အကြောက်ဆုံးဖြစ်သည်။
၃၁။ သရဲ ၊တစ္ဆေ ထက် လူ ကို ပိုကြောက်တတ်ကြသည်။
၃၂။ ဆွေမျိုးသားချင်းများကို အိမ်ထောင်ချပေးရန်မှာ သူတို့တာဝန်ဟု ထင်တတ်ကြသည်။
၃၃။ အိပ် လျှင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်၊လွတ်လွတ်လပ်လပ် အိပ်ချင်ကြသည်။
၃၄။ စည်းစနစ်ကြီးသူများ ဖြစ်တတ်ကြသည်။
၃၅။ အိမ်ထောင်ထိန်းသိမ်းမှုတာဝန်ကို ချစ်မြတ်နိုးသူများဖြစ်တတ်ကြသည်။
၃၆။ ဖြစ်ကတတ်စမ်း နေလေ့ရှိသူများ မဟုတ်တတ်ကြပါ။
၃ရ။ ဓါတ်ပုံ(အလှပုံ)ရိုက်ရန် ၀န်လေးနေတတ်သူများဖြစ်သည်။
၃၈။ သူတို့အချစ်ကို အဝေးမှcelebrities များအပေါ် ပုံအောထားဟန်ပြုတတ်ကြသည်။
၃၉။ မိမိအားနည်းချက်ဟုတွေးထင်ထားသောအရာများ များပြားနေတတ်သည်။
၄၀။ မိမိအားနည်းချက်ဟုထင်သောအရာများကို ဖုံးဖိရန်ကြိုးစားတတ်ကြသည်။
၄၁။ မိတ်ဆွေအိမ်ထောင်ရှင်များကို အိမ်ထောင်ဝန်ပိနေသူများဟုထင်တတ်ကြသည်။
၄၂။ အစား ကောင်းကောင်းလုပ်စားတတ်ကြသည်။
၄၃။ မိမိစိတ်ခံစားချက်များကို ဖုံးကွယ် ၊ဖိနှိပ်ထားတတ်သူများဖြစ်ကြသည်။
၄၄။ အများအားဖြင့် ဟန်ဆောင်ကောင်းတတ်သည်။
၄၆။ မင်္ဂလာဆောင်များကို သွားရန်ဝန်လေးတတ်ကြသည်။
၄ရ။ ပြေးကြည့်ဘို့ထက် တွေးကြည့်ဘို့ ပိုအားသန်တတ်ကြသည်။
၄ဂ။ အလုပ်တွင်စိတ်ကိုနှစ်၍ ကြိုးစားတတ်သူများဖြစ်သည်။
၄၉။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုအားကြီးတတ်သည်။
၅၀။ ဘ၀တူ လူပျိုကြီး၊အပျိုကြီး စာရင်းကို ပြုစုထားရှိကာ အားတင်းထား တတ်ကြသည်။
၅၁။ ဘ၀ရည်မှန်းချက်ကြီးသူ များဖြစ်တတ်သည်။
၅၃။ မရေရာသော အကြောင်းပြချက်များ ဆွဲကိုင်ထားတတ်ကြသည်။
၅၄။ ထောက်ထားညှာတာစရာ များစွာ ရှိတတ်ကြသည်။
၅၅။ တစုံတခုတွင် နှစ်မြုတ်ရင်း မေ့ပင်အောက် ရောက်နေတတ်သည်။
၅၆။ ရွေးရင်းရွေးရင်းနှင့် နောက်ထပ်ရွေးစရာကိုထပ်မျှော်နေတတ်ကြသည်။
၅ရ။ မိသားစုအားလုံး၏တာဝန် ကိုယ့်တာဝန်ဟု မှတ်ယူတတ်ကြသည်။
၅၈။ ကိုယ်တိုင်သာမက အားလုံးကအကြိုက်ညီတာမျိုးကို ရှာဖွေတတ်သည်။
၅၉။ တစ်ယောက်ယောက်၏ မပေးရသေးသောမှတ်ချက်ကိုပင် ကြို၍ကြောက်တတ်သည်။
၆၁။ တစ်နှင့်တစ်ပေါင်းလျှင် နှစ်ထက်ပိုကြီးနိုင်သည် ဟု လက်မခံလိုကြ။
၆၂။ ခံစားချက်မရှိသူ ဟုအပြောခံရမှာကြောက်တတ်ကြသည်။
၆၃။ ခံစားချက်ရှိသူ ဟုပြောလျှင်လည်း မကြိုက်တတ်ကြ။
၆၄။ ဘယ်တော့စားရမလဲ ဟုမေးလျှင် (စိတ်ထဲက) ကြေနပ် နေတတ်ကြသည်။
၆၅။ ပစ္စည်းများကို တစ်ယောက်ကိုင်အဖြစ်ပဲ သုံးချင်တတ်ကြသည်။
၆၆။ သိပ်ကြိုက်သည့်ပစ္စည်းဆိုရင် ပုံစံတူနှစ်ခုလောက်ဝယ်တတ်ကြသည်။
၆၇။ မည်သည့်အရာကိုမျှ ကိုယ် ကို တိုင်လောက် စိတ်မချချင်တတ်ကြပေ။
၆ဂ။ လူစိမ်းတွေကြားမှာ ခပ်တည်တည်ကြီးနေတတ်ကြသည်။
၆၉။ မိတ်ဆက်ပေးလျှင် ဟက်ဟက်ပက်ပက် မရှိတတ်ကြ။
၇၀။ ပထမဦးဆုံးတွေ့တာဖြစ်လျှင် ဆံပင်အစ၊ခြေသည်းအဆုံး ချက်စ်တတ်ကြသည်။
၇၁။ စားသောက်ဆိုင် တစ်ဆိုင်ရောက်လျှင် ပထမဦးဆုံးရေအိမ်ဝင်တတ်ကြသည်။
၇၂။ လူရှင်းရာနေရာ ရှာ၍ ပုဆိုး၊ထမီ ကိုဖြန့်ပြီး သေသပ်အောင်ပြင်တတ်ကြသည်။
၇၃။ နှုတ်ခမ်းနီ(သို့) ခေါင်းဘီး နေရာတကာ ယူတတ်ကြသည်။
၇၄။ အကျည်းတန်မဟုတ်သော်လည်း မှန်ကြိုက်တတ်ကြသည်။
၇၅။ မည်မျှမှန်ကြည့်ပြီးသည်ဖြစ်စေ အဆင်ပြေရဲ့လား ထပ်မေးတတ်သည်။
၇၇။ ထီ ကို လူမသိအောင် ထိုးတတ်ကြသည်။
၇၈။ ပိုက်ဆံ ကို လူမသိအောင် စုတတ်ကြသည်။
၇၉။ သီချင်းကို လူမကြားအောင် ဆိုတတ်ကြသည်။
၈၀။ သနပ်ခါး(မိတ်ကပ်)၊ ပေါင်ဒါ(ခေါင်းလိမ်းဆီ) မရှိမဖြစ်ဆောင်တတ်သည်။
၈၃။ စိတ်ပြေဘို့ အချိန်တော်တော်ကြာအောင် ယူတတ်ကြသည်။
၈၄။ အားလျှင် ခြေသည်း၊လက်သည်း သနေတတ်ကြသည်။
၈၅။ စ တာ၊ နောက် တာ ကို အတည်ဟု မှတ်ယူတတ်ကြသည်။
၈၆။ ချစ်သူစုံတွဲယုယုယယနေတာကို မြင်ပြင်းကတ်တတ်ကြသည်။
၈ရ။ လိုတာမရ၍ မဟုတ်ပဲရတာမလို၍ဟူသောလက်သုံးစကားကိုတွင်တွင်သုံးတတ်သည်။
၈၈။ လူပျိုကြီး၊အပျိုကြီးဖြစ်ကြောင်း မကြေညာသော်လည်း သိနေစေချင်ကြသည်။
myanmar news update မှ ....
Posted by 925 at 09:030comments
(အင်ဂျင်နီယာ ဦးလေးကြီး တစ်ယောက်ပြောပြသော ပုံပြင်ကို ပြန်လည် မျှဝေခြင်း ဖြစ်ပါသည်…
မည်သို့ပင် ဆိုစေကာမူ ငရဲမင်းကြီးအား မျက်နှာရစေသော အင်ဂျင်နီယာများ ကိုယ်စား ဂုဏ်ယူမိပါသည်…
အင်ဂျင်နီယာ လူဆိုးများ လိမ္မာကြကုန်လော့…)
fwd mail မှ
Posted by 925 at 06:560comments
Annie Shine (ဟိုတုန်းကလို)
Posted by 925 at 04:320comments
Posted by 925 at 09:500comments
ကျိန်စာပြေပျောက်ဖို့အတွက် တောကြီးမြွေဟောက်ကို နမ်းရတဲ့ မြန်မာ အမျိုးသမီး
မြန်မာနိုင်ငံ ရွာတရွာကပါ။ ဘယ်ရွာလဲတော့မရေးထားဘူး.. အဲ့ဒီရွာကအိမ်ထောင်တွေမှာ သားမမွေးတာကြာပြီဆိုတော့ အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတာ သူတို့ရွာက နတ်ဘုရား(မြွေဟောက်)ဒေါသသင့်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြတယ်လေ။
ဒီ ဗီဒီယို ထဲက အမျိုးသမီး( နတ်ဆရာမ) က ရွာသူရွာသားတွေကိုယ်စား အ၀တ်အစား၊ ပူဇော်သကာတွေ ယူပြီး မြွေဟောက်ရှိတဲ့ဂူကို သွားပြီးပူဇော်ရပါတယ်။ ထွက်လာတဲ့ မြွေဟာက်ဦးခေါင်း ကို ၃ကြိမ်၃ခါ ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးစားပမ်းစား နမ်းရပါတယ်၊ အဲ့လိုလုပ်ရတာဟာ သူတို့ရွာကို ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ အမနှစ်ယောက်ကတော့ မြွေဟောက် ကိုက်ပြီး သေပြီဖြစ်ပါတယ်...
Basically, in that village no male child was born foravery long time and it is beleived by villagers that they have angered the God (cobra) for some reason. This priest lady brought food to that cobra and had to kiss hood three times to get forgiveness for her people.2sisters of that lady died from cobra bites.
Posted by 925 at 22:210comments
Posted by 925 at 20:250comments
ဆီးချိုပျောက်နည်းမျာစွာထဲက လက်တွေ့နည်းလမ်းကောင်းလေး တစ်ခုပါ
ဆီးချိုဖြစ်လို့ မန္တလေး ဆေးရုံကြီးကို သွားရောက်ပြပါတယ်။ အထူးကုသမားတော်ကြီးက ဆရာဝန်ကြီး ဦးထွန်းတင် (ယခု ဆရာကြီး ကွယ်လွန် ) ဆေးပညာရှင်များ အထူးလေးစားရသည် ဆရာကြီး ဖြစ်ပါသည် ။
Posted by 925 at 03:390comments
အာလူးပါတဲ့ အစားအစာ ဆိုတာ ကျနော်တို့စားပွဲတော်တော်များများမှာ ပါရှိတက်တဲ့ အမယ်တစ်မျိုး လို့ လည်း ပြောလို့ ရပါတယ်။ အာလူးကို ကြိုက်သည် ရှိသော် မကြိုက်သည်ရှိသော အခု မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ အာလူးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်မှု ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းကို စတင်ခဲ့တာက Solanine လို့ အမည်တွင်တဲ့ ဓာတုဓာတ်ပါတဲ့ အဆိပ်တစ်မျိုးကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
သူက အာလူးနဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးမှာ အဓီက တွေ့ ရတဲ့ အဆိပ်တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိပ်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ ရှိခဲ့တာကတော့ ၁၈၂၀ ခုနှစ်ပိုင်း ဥရောပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ အစိမ်းရောင် သန်းနေတဲ့ အာလူးကို စားသုံးမိမယ် ဆိုရင် မအီမသာ ဖြစ်လာမယ် ၊ ၀မ်းလျှောတာတွေ ၊ ပျို့ အန်တာတွေ ဖြစ်မယ် ၊
နောက် အစာအိမ်ကို ထိခိုက်စေပြီး လည်ချောင်းကိုလည်း အပူကန်စေနိုင်တယ် ၊ ကယောင်ချောက်ချားဖြစ်မယ် ၊ နောက်ဆုံး ခေါင်းကိုက်ခြင်းနဲ့ ခေါင်းမူးခြင်းကို ပါ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အစာ ဆိပ်တက်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီလို အစိမ်းရောင် သန်းနေရခြင်းကလည်း နေရောင်ခြည်နဲ့ အစာချက်လုပ်ဆောင်ခြင်း
ဓာတ် chlorophyll များစွာ ပါရှိနေတဲ့ အတွက်ကြောင့် ဆိုထားပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဈေး နဲ့ စူပါမားကတ် တစ်ချို့ မှာလည်း ဒီလို အစိမ်းရောင် သန်းနေတဲ့
အာလူးများကို မရောင်းချ ဖို့ တားမြစ်ထားပါတယ်။
အကယ်လို့ မိမိချက်တဲ့ အခါ အစိမ်းရောင်အပိုင်းဟာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း
အနေနဲ့ ပါဝင်နေမယ် ဆိုရင်လည်း ထိုပါဝင်နေတဲ့ အပိုင်းကို လှီးထုတ်ပစ်
အစိမ်းရောင်ပါတဲ့ အာလူးဟာ လတ်ဆပ် တာ မဟုတ်ဘဲ အဆိပ်ဖြစ်စေတက်တာကို
သတိပြုနိုင်ဖို့ နဲ့ စားသုံးမိသူများ အနေဖြင့် အစာ အဆိပ်သင့်တဲ့ သာဓက များ
လတ်တလော ဖြစ်ပွားနေပြီး မိမိကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွာစွာ ထိခိုက်စေတာ ကြောင့်
Posted by 925 at 03:252comments
Posted by 925 at 08:260comments
Posted by 925 at 03:36 1 comments
သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့မှာ ISS (International Space Station) မှာ ရုရှလူမျိုးများဖြစ်သော Sergei Krikalev နှင့် Yuri Pavlovich Gidzenko ၊ အမေရိကန်လူမျိုးဖြစ်သော William Shepherd တို့ဟာ အာကာသ ထဲမှာ တေးသံသွင်း ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ဟာ ISS မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပြီး ထို တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ အချိန်အတွင်းမှာ အမှတ်တရ အနေနဲ့ တေးသံသွင်းခဲ့ ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ISS မှာ ရက်ပေါင်း ၁၃၆ ရက်ကြာမြင့် အောင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပြီး ကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ် ကို အောင်မြင်စွာ ပြန်လည်ဆင်းသက်လာခဲ့ကြပါတယ်။
Posted by 925 at 03:210comments
Posted by 925 at 04:350comments
တစ်နေ့တာ ညစ်နေတာတွေကို ဆေးကြောပေးမဲ့ ဆပ်ပြာမူဗီ :)
Posted by 925 at 08:113comments
ခြင်္သေ့နှင့်တူအောင် ပြုပြင်ထားသည့်ခွေးကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့အလုပ်များ
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဗာဂျီးနီးယား ပြည်နယ်ရှိ နော်ဖော့ခ် ရဲတပ်ဖွဲ့သို့ လူတစ်ဦးက အင်္ဂါနေ့တွင် ဖုန်းခေါ်ပြီး လမ်းပေါ်တွင် ခြင်္သေ့ အငယ်စားတစ်ကောင် လျှောက်သွားနေကြောင်း တိုင်ကြားခဲ့သည်။အမွေးများကို ခြင်္သေ့နှင့်တူအောင် ပြုပြင်ကာ ရိတ်ထားသည့် ခွေးတစ်ကောင်ကြောင့် ဗာဂျီနီးယား ရဲတပ်ဖွဲ့ အလုပ်ရှုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဗာဂျီးနီးယား ပြည်နယ်ရှိ နော်ဖော့ခ် ရဲတပ်ဖွဲ့သို့ လူတစ်ဦးက အင်္ဂါနေ့တွင် ဖုန်းခေါ်ပြီး လမ်းပေါ်တွင် ခြင်္သေ့ အငယ်စားတစ်ကောင် လျှောက်သွားနေကြောင်း တိုင်ကြားခဲ့သည်။ ကိုလီရိပ်သာလမ်းတစ်လျှောက် ခြင်္သေ့တစ်ကောင် လွတ်နေပြီး ယင်းသည် အစာရှာနေဟန်ရှိကြောင်း သတင်းသည် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို မျက်လုံးပြူးသွားစေသည်။
ထို့ကြောင့် ရဲများသည် ဗာဂျီးနီးယား တိရစ္ဆာန်ရုံမှ တာဝန်ရှိသူများအား ဆက်သွယ်ပြီး သတင်းပို့ရာ နေရာသို ခြင်္သေ့ဖမ်းရန် အလျင်အမြန် ရောက်ရှိလာကြသည်။ ထို့နောက်တွင်တော့ ရဲများသည် အသက်(၃)နှစ်အရွယ် လာဘရာဒိုဒယ်လ် ခွေးကလေး ချားလ်စ်ကို တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်မူ ဝါရင့် ရဲဝန်ထမ်း အချို့က ချားလ်စ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး လူအများ အမြင်မှားသည်မှာ ယခုတစ်ကြိမ် ပထမဆုံး မဟုတ်ဟု ဒေသခံ သတင်းဌာနများသို့ ရယ်မော ပြောဆိုခဲ့သည်။
ချားလ်စ်၏ ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ ဒန်နီရယ်လ် ပိန်းတားက အဆန်းထွင်ကာ ချားလ်စ်ကို ခြင်္သေ့တစ်ကောင်နှင့် တူအောင် အမွေးများ ရိတ်ဖြတ် အလှဆင်ပေးထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ချားလ်ကို မျက်မှန်းတန်းမိနေသည့် အိမ်နီးချင်းများက ခွေးတစ်ကောင်မှန်း သိရှိသော်လည်း ရုတ်တရက် တွေ့မြင်လိုက်သည့် လူစိမ်းများကမူ အမြင်မှားနေဆဲဟု သိရှိရသည်။
Posted by 925 at 07:310comments
Posted by 925 at 07:080comments